Cirbadda caagga ah
Badeecadaha caadiga ah ee P&Q
Iftiinka Cimilada Cimilada / Burburka-Caddaynta Iftiinka
Iftiinka Cimilada Cimilada / Burburka-Caddaynta Slim Slim
Qashin-qaadayaasha Miinada Iyo Nalka Madal
Iftiinka bulkhead-ka warshadaha
Dhimashada nalka saqafka aluminium
Ku dhinta bulkhead
nalka gudbiyaha miinada
Nalalka caddaynta waxyeellada
Nalalka gudbinta miinada
Dajinta Die waa hab wax soosaar hufan oo dhaqaale leh. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro qaybo bir ah oo joomatari ahaan murugsan oo ay sameysmaan wasakhdo dib loo isticmaali karo, oo loo yaqaan 'dies'. Dhimashadani guud ahaan waxay bixiyaan nolol dheer, waxayna awood u leeyihiin inay soo saaraan qaybo muuqaal ahaan soo jiidasho leh.
Geedi socodka shubista dhimashadu waxay ku lug leedahay adeegsiga foornada, biro la shubay, mashiin ridaya dhinta iyo dhimasho si khaas ah loogu sameeyay qaybta la tuurayo. Birta waxaa lagu dhalaaliyaa foornada ka dibna mashiinka wax lagu rido ayaa birahaas ku duraya dhinta.
P&Q ma lahan warshad irbad caag ah, laakiin sidoo kale waxay ku siin kartaa qaybo bir ah sida ay macaamiisha u baahan yihiin. Qaybaha cirbadeynta balaastigga ah ee loo yaqaan 'P&Q', yar yar illaa weyn, inta badanna nalalka iyo dalabka alaabta guryaha.
P&Q ma lahan warshad bir ah, laakiin sidoo kale waxay ku bixin kartaa qaybo bir ah sida ay macaamiisha u baahan yihiin. Cabbir yar illaa weyn, inta badan nalalka iyo arjiga alaabta guryaha.
Isku-dubaridaha alaabooyinka la dhammeeyay iyo alaabooyinka dhammaaday
Warshadda shirarka ee P&Q ay leedahay waxay ku taal Haining, Zhejiang, Shiinaha. Aan ka yarayn 6000 m2.
Wax soosaarku wuxuu ku shaqeynayay maaraynta tayada ISO9001. Oo xafiiska iyo warshadu waxay ku maareeyeen nidaamka ERP ilaa iyo 2019.
Iftiinka Wadada LED-PQSL003
Awooda: 80W, 150W
Cabbirka Badeecada (mm):
4. Aluminium tuurista dhinta 5. Cimriga:> 50,000hrs
Ku dhinta nalka aluminium bulkhead
2. Samsung 5630 ayaa horseeday> 95lm / w
4.die aluminium shubay + diffuser PC cad:
Shaqada la heli karo: Sensor, Emergency
Waa noo IP65, IK10, bulkhead ku habboon noocyo kala duwan oo codsiyada gudaha iyo dibedda ah. Guryuhu si buuxda ayaa loo soo saaray halkan Shiinaha iyada oo la adeegsanayo polycarbonate tayo sare leh iyo aluminium u dhinta.
Bulkhead / EM Bulkhead Nalka Iftiinka
Waxqabadka sare, iskujirka ah, dib u habeynta laydhka LED-ka bulkhead The Bulkhead waa waxqabad sare iyo nal warshadeed fara badan oo si taxaddar leh loogu farsameeyay jawaab celin ka timid shaqaalaha dayactirka macdanta si loo hubiyo in si fudud loogu rakibo iftiin adag oo aan la burburin karin.
Installation Rakibid fudud design Naqshadeynta Universal Mount
IP Qiimaynta IP-ga iyo saamaynta ● Waxaa lagu heli karaa qaab smart EM ah
Nalalka asalka ah, aadka loogu kalsoonaan karo, iftiinka gudbiyaha goobta lagu caddeeyay.
Freelander waxaa loogu talagalay inay bixiso habka ugu tamarta badan ee waxtar u leh iftiiminta gawaarida warshadaha iyo socodka, awood u leh bixinta ugu yar ee loo baahan yahay 30 lux oo celcelis ahaan 80 lux ah marka la dheereeyo illaa 12m marka laga reebo dhererka rakibidda caadiga ah ee 2.7m iyo a 5-digrii oo janjeera. Kordhinta baarka waxqabadka iyo hufnaanta qalabka wax soosaarka warshadaha iyo nalalka socodka.
Naqshadeynta unibody ee adag waa labadaba mid fudud oo la jaanqaadi kara dabacsanaanta ku habboon rakibidda buundada buufinta badan ee heerka warshadaha. Ikhtiyaar-ku-dhisan iftiinka iftiinka maalinta ayaa sameyn doona is-beddel otomaatig ah inta u dhexeysa hababka habeen iyo maalinba si uu si weyn hoos ugu dhigo isticmaalka awoodda. Sidoo kale waxaa laga heli karaa Duurjoogta Amber Amber.
Dhimashada jirka, Hummer Slim LED PRO Luminaire daciif ah oo cimilo leh si ay ugu adkeysato daxalka ama bey'ada u nugul.
Naqshadeeyay oo la soo uruuriyay kala duwanaanta kala duwanaanta hawada ee cimilada leh waxay leedahay taariikh la xaqiijiyay oo la aaminay oo ah mid ku adag dhammaan heerarka warshadaha iyo meelaha dadweynaha oo ay ku jiraan xarumaha gaadiidka, iskuulada, warshadaha culus, iyo meelaha waxyeellada badan ay ka jirto Qalabka koontaroolka ayaa dib loo habeeyay si loo fududeeyo, si hufan u hufan, oo ku habboon Lumen Select Technology,
Dhimashada jirka, Hummer LED PRORobust LED luminaire cimiladeed si ay ugu adkeysato daxalka ama jawiga u nugul waxyeellada.
cinwaanka:No 11 Dhisme, No. 8 Haining Avenue, HAINING, JIAXING, 314400 Shiinaha